टेकु अस्पतालको निर्देशकमा मनीषा रावल नियुक्त, डाक्टर बाँस्तोलालाई हटाइयो – Nepal Press
२०७८ मंसिर १२ गते २१:२२
काठमाडौं । स्वास्थ्य मन्त्रालयले कर्मचारीको जिम्मेवारी हेरफेर तथा सरुवा गरेको छ। केही दिन अगाडीको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कर्मचारीको सरुवा गरिएको जनाइएको छ ।
सरुवा गरिएका कर्मचारीलाई सोमबार नियुक्तीपत्र दिने तयारी छ । मन्त्रालयले शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक डा. अनुप बाँस्तोलालाई सरुवा गरेका छन्। उनलाई सार्क क्षयरोग केन्द्रको प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ । टेकु अस्पतालको निर्देशकमा डा. मनिषा रावलले जिम्मेवारी पाएकी छिन्।
परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालकी निर्देशक डा. संगीता मिश्रालाई स्वास्थ्य समन्वय महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ। उक्त महाशाखामा रहेकी रीता भण्डारी जोशीलाई मन्त्रालयमा नै महाशाखाविहिन बनाइन लागिएको छ।
प्रसूतिगृहबाट संगीता मन्त्रालयमा आउने भएपछि अस्पतालका डा. अमिरबाबु श्रेष्ठलाई निमित्त निर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको छ। नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखामा डा तारा पोखरेललाई लागिएको छ। पोखरेल अहिले सार्क क्षयरोग केन्द्रमा छन्।
कोरोना नियन्त्रणमा भूमिका खेलेका टेकु अस्पतालका डाक्टर बाँस्तोलालाई हटाउने निर्णयको कारण मन्त्री विरोध खतिवडाको विरोध भइरहेको छ। डा. बाँस्तोला कोभिडको पहिलो लहरदेखिनै संक्रमितको उपचारमा सक्रिय छन्। साथै उनी टेकु अस्पतालकै सुधारमा लागेका छन्।
बाँस्तोलाले जिम्मेवारी समालेपछि ओपिडी विस्तार, फार्मेसी, बिरामी, अक्सिजन ग्याँस, स्टोर, आइसियु वेड, क्वाटर, ३०० शय्याको सरुवारोग अस्पताल निमार्ण लगायतका क्षेत्रमा काम गरेका छन्।
प्रकाशित: २०७८ मंसिर १२ गते २१:२२